Tag: Kismayo | Sagal Radio Services
AMISOM oo sheegtay in Al-shabaab ku dishay duleedka Kismaayo
Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ayaa la sheegay in askar ka tirsan Alshabaab ku dileen duleedka magaalada Kismaayo, kadib dagaal dhex maray AMISOM iyo Alshabaab.
Guddi ay dowladdu u xil-saartay arrimaha Jubbooyinka oo hadlay
Gudigii ka koobnaa 16-ka xubnood ee dowladda Soomaaliya u magacoowday arimaha Jubooyinka, mudooyinkii u danbeeyayna ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay halka ay u marayaan kulamo maalmihii u danbeeyay ay la lahaayeen waxgaradka iyo odoyaasha kasoo jeeda Jubooyinka.
Wafdi ka socda Puntland oo Kismaayo gaaray
Wafdi heer sare ah oo maanta ka dhoofay Garoowe ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si ay uga qeyb-galaan shirka ka socda Kismaayo.
Dagaalkii Kismaayo oo khasaare nafeed sababay, xaaladduna ay deggan tahay maanta
Ugu yaraan inta la og yahay siddeed ruux, ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro toban ka badanna way dhaawacmeen, markii uu shalay dagaal Kismaayo ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka KMG ah ee Kismaayo jooga.
Guddoomiyaha Jabhadda Raaskaambooni oo sheegay inuusan jirin khilaaf u dhaxeeya iyaga iyo dowladda Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • December 29, 2012
Guddoomiyaha Jabhadda Raaskaambooni Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa sheegay inaanu jirin wax tafaraaruq ah ama mad madow ku dhex jira jabhaddisa iyo dowladda dhexe.
Weeraro lagu qaaday saldhigga iyo garroonka Kismaayo xalay
Kooxda al-Shabaab, aya sheegatay weeraro loo adeegsaday madaafiic iyo rasaas caadi ah oo xalay lagu kala qaaday saldhigga degmada Kismaayo iyo garroonka dayuuradaha ee magaaladaasi.
Qarax ka dhacay Kismaayo iyo howl gal ay ciidamadu sameeyeen
Sagal Radio Services • News Report • October 15, 2012
Wararka ka imaanya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax xoogan oo lagu weeray Askar ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliya.